छाउगोठ भ’त्किए, चलन चाँहि कहिले भत्किन्छ ? – Khabarhouse
छाउगोठ भ’त्किए, चलन चाँहि कहिले भत्किन्छ ?
Khabar house | २३ पुष २०७६, बुधबार १५:१८ | Comments
बझाङ । बझाङका अधिकांस ठाउँमा अझै पनि दर्जनौँ छा’उगोठ रहेका छन् । पछिल्लो समय भने अभियान नै चलाएर छा’उगोठ भ’त्काउन थालिएको छ । जिल्ला प्रशासनको निर्देशनमा प्रहरीले स्थानीय तह र स्थानीहरु सँगै समन्वय गरेर गाउँगाउँमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै छाउघर भ’त्काउन सुरु गरेको हो । प्रहरीले पुस महिना यता मात्रै जिल्लाका विभिन्न गाउँका १ सय ५० भन्दा बढी छा’उगोठ भ’त्काएको छ ।
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले छाउप्रथा जडित समूदायमा प्रहरी, स्थानीय तह, सामाजिक संस्था, समुदाय र विद्यालयलाई सचेतना मूलक कार्यक्रम गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। थलारा खप्तडछान्ना, मष्टा, दुर्गाथली र जयपृथ्वी नगरपालिका का विभिन्न ठाउँमा छाउघर भत्काएको र जयपृथ्वी नगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा छाउघर भत्काउन ताकेता गरेको बझाङ प्रहरी प्रमुख तथा डिएसपी गणेशबहादुर बमले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी जयपृथ्वी नगरपालिकामा २३ भन्दा बढी छाउघर भत्काइ सकेको बताइएको छ । बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जिल्लाका ग्रामिण बस्तिहरुमा छा’उगोठ व्याप्त रहेका कारण अब छाउ गोठहरुलाई हटाउन सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । छाउपडी गोठमा बस्ने र बसाल्न लगाउने जोकोहीलाई पनी तिन महिना कैद वा तिन हजार जरिवाना गरिने उनले बताए ।
आफूले छाउगोठ भत्काउनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई समेत आग्रह गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेको भनाई छ । छा’उगोठ भत्काउन जत्तिको आवश्यकता छ त्यो भन्दा बढी आवश्यकता चेतनामा वृद्धी गर्न रहेको सामाजीक अगुवा धर्मजङ्ग सिंहले बताए । उनले भने, “छाउपढी मान्ने यी मान्छेका सोच भत्किनुपर्दछ । छाउगोठ आफैँ भत्किन्छन् ।” नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
सुदूरपश्चिममा महि’नावारी हुँदा त्यसलाई देउतासँग जो’डेर पा’प र ध’र्मको दृष्टिकोणले छाउ बार्ने चलन रहँदै आएको छ । महिनावारी बार्ने क्रममा किशोरी तथा महिलाहरुलाई यस्तो खालको घाम नछिर्ने घरमा राखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमै छा’उपडी लाई कु’प्रथा मान्दै त्यसलाई नि’र्मूल पार्न आदेश दिएको भए पनि कतिपय शिक्षित र सम्पन्न घरमै पनि महिलाहरु छा’उगोठमा बस्न बाध्य छन् । यस्ता छा’उगोठमा बस्दा खासगरी बझाङ सहित अछाम, बाजुरा लगायत सुदूर पश्चिमका जिल्लामा धेरै किशोरीहरुको ज्यान समेत गएको समाचारहरु आएका थिए ।
छा’उप्रथा अ’न्त्यका लागि समय लाग्ने देखिए पनि गाउँघरमा भने छाउपडी वि’रुद्ध बिस्तारै आवाज उठ्न थालेका छन। कतिपय ठाउँमा छा’उप्रथा वि’रुद्धको जनचेतना बढाउन स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएका छन् भने त्यसबारे कानूनी सचेतनाबारे प्रहरीले गाउँलेलाई जानकारी दिइरहेका छ । गाउँघरमा मात्रै होइन वडा अध्यक्षहरुको सहभागितामा महि’नावारी हुँदा छाउघरमा बसे कस्तो शारिरीक तथा मानसिक असर पर्छ भन्नेबारे विद्यालयमा पनि जनचेतना फैलाउने कामहरु भइरहेका छन् ।